Kenya Oo codsi Lama filaan ah usoo dirtay Soomaaliya – XAMAR POST
Kenya Oo codsi Lama filaan ah usoo dirtay Soomaaliya
Madaxweynaha Waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa madaxda Waddanka Qadar ka dalbaday in ay qaban qaabiso kulan lagu dhex dhexaadinayo kiiska Badda ee Kenya iyo Soomaaliya.
Wargeyska African Intelligence ayaa daabacay in Dowladda Kenya aysan wali ka quusan in kiiska Badda ee u dhaxeeya labada dal lagu dhameeyo wadahadal.
Wargeysku waxaa uu sheegay in labada Dal ee Kenya iyo Soomaaliya oo u afduuban dagaalka dalalkooda ku dhexmaray Qadar iyo Imaaraadka haddana Kenya oo taageero ka hesha Imaaraadka ay markan Qadar ka dalbaaty wadahadal in lagu qabto Caasimadda Qadar ee Dooxa.
African Intelligence ma caddeyn in Dowladda Qadar aqbashay dalabka Uhuru Kenyatta iyo in kale.
Farmaajo ayaa saaka ka soo laabtay Congo iyada oo la sheegayo in uu Midowga Afrika weydiistay in isaga iyo Mucaaradka Soomaaliya ay wadahadal siiyaan.
Tallaabadan ayaa loo arkay mid uu Farmaajo ugu sheegayo Reer Galbeedka in xallinta khilaafka doorashada Soomaaliya uu midowga Afrika uga dhawyahay Beesha Caalamka.
Maxkamadda ICJ ayaa 15kii Bishii March dhegeysatay kiiska Badda ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya waxaana dhegeysigaan ka maqnaa Kenya oo sheegtay in ay ka gadoodsantahay Garsoore Soomaali ah oo qeyb ka ah Garsoorayaasha Maxkamadda ICJ.
Dhinaca kale Wargeysku waxaa uu sheegay in Farmaajo oo cadaadis dhaqaale kala kulmay Reer Galbeedka ay u badantahay in uu dhegeysto dalab uga yimaada Qadar maaddaama dhaqaalaha ugu badan dowladdiisu ka hesho Qadar iyo Turkiga.
Madaxweyne Farmaajo ayaa iska diiday baaqyo uga yimid saaxiibada Soomaaliya ee Beesha Caalamka oo ahaa in teendadha Afisyooni lagu laabto iyada oo haddii uu diidana ay ku hanjabeen in ay dib u eegis ku sameynayaan taageerada dhaqaale iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leeyihiin Soomaaliya.
Dhageyso: Jubbaland Oo ciidamada Ka talaaleysa Cudurka…